राजेश र कोमलले राजनीति गर्ने !
काठमाडौं । नायक राजेश हमालले करिब तीन महिनाअघि समय अनुकूल भएमा चाँडै आफू राजनीतिमा आउने बताएका थिए । राजनीतिदेखि अधिकांश मानिस वाक्क भईरहेको बेलामा अब भने राजेश हमाल एक्लै होइन गायिका कोमल वलीलाई समेत साथमा लिएर राजनीतिक मैदानमा ओर्लने भएका छन् ।
राजनीतिकै कारण देश दुर्गतितिर लम्किरहेको बेला सिनेमा र संागीतिक क्षेत्रका दुई सेलिब्रेटीहरुको आगमनले राजनीतिको दुर्गन्धित बाटो सफा होला ? यसको सोझो उत्तर हो, हुँदैन । किनभने राजेश र कोमल वास्तविक जीवनमा नभई रिल लाईफमा राजनीत गर्दैछन् ।
दीपक सुवेदी र दीपककुमार भट्टराईको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन गईरहेको चलचित्र 'राजनीति' मा राजेश र कोमलले एउटै घरबाट फरक विचारधारमा राजनीति गर्नेछन् । राजनीतिक विषयवस्तुलाई उठान गर्न खोजिएको सिनेमामा कोमल, राजेश निर्माताद्धय र पवित्रा आचार्यको अभिनय रहने छ ।
सिनेमाको सुटिङ चाँडै थालिने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । कोमलले राजनीति गर्न चार लाख रुपियाँ पारिश्रमिक मागेको र निर्माण पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको छ । कुनै समय विवाह गर्ने हल्ला चलेको राजेश र कोमल जोडीले पर्दामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
suresh bogati भन्नुहुन्छ:
ek dam ramro ksam garna thaln9 vo dai I sulite u
prem kumar shrestha भन्नुहुन्छ:
ok goog rajas ji ldlxoim musua;'0-QSLOWPD65 WDOPSCKCOCHJ[WCJI
prem kumar shrestha gorkha 9phalate भन्नुहुन्छ:
ok goog rajas ji
ramro bichar ho filem vhanako samajama gataka bibed gatanaharulai atherthama yasto ho vhaner dhakhauna madeyam ho.uniharuko bicher desma chalako poltice narmro vhayako cha yaslai ramro bhanaya deas agadi bad6 vhana ho/ rajesh ra komal lai muri muri dhaniyabad